Mavhesi eBhaibheri Pane Zvepamusoro: Mhuka -> Hupenyu
Mwari akasika mhando nemhando dzamazigaranyanya omumvura nedzezvinhu zvose zvazvo zvipenyu zvinofamba, zvinoita bvakapfaka mumvura, namarudzi ose eshiri dzine mapapiro. Mwari akaona kuti zvakanaka.
Asi ndapa zvinomera zvinyoro kumhuka dzesango neshiri dzose dzedenga, nezvinokambaira nokuzvova napasi, nezvinhu zvipenyu zvose zvinofema kuti chive chokudya chazvo,” zvikabva zvaita saizvozvo.
Mhuka dzamarudzi ose neshiri nezvose zvinozvova napasi nezvinhu zvomugungwa zvinogona kupingudzwa uye zvinopingudzwa navanhu.
“Inga wani kunyange shuramurove zvaro mudenga umu, rinoziva nguva yaro uye njiva kana mherepere kunyange nhapata dzinochengetedza nguva yadzo yokuuya wani. Asi vanhu vangu havamboziva zvavo murao waTenzi.
Iye anodzidzisa isu vanhu kupinda mhuka dzenyika achitiita isu vakangwara kupinda shiri dzedenga.
Akarurama ane hanya noupenyu hwezvipfuo zvake asi akaipa chaanoti tsiye nyoro utsinye.
Shumba dzechidiki dzinodzvovera chokudya dzichitsvaka chokudya chadzo kuna Mwari.
 Mwari Tenzi akatora ivhu akaumba mhuka dzose dzesango, neshiri dzose dzedenga, akauya nadzo kuna Adhamu achida kuona kuti achadzitumidza mazita api. Mazita ose akatumidzwa zvinhu zvipenyu naAdhamu, ndiwo akava mazita azvo. Adhamu akatumidza mazita zvipfuwo zvose, neshiri dzedenga nemhuka dzose dzesango. Asi Adhamu akanga asina mubatsiri aikodzerana naye.
 Mhuka dzose dzapasi pose, neshiri dzose dzedenga, nezvose zvinokambaira nokuzvova napasi, nehove dzose dzomugungwa dzichakutyai dzichikudederai. Dzose ndadziisa mumaoko enyu. Zvinhu zvipenyu zvose zvinofamba zvichava chokudya chenyu. Ndakupai zvose zvazvo sokukupai kwandakaita miriwo minyoro.
 Mwari akati, “Nyika ngaiburitse mhando nemhando dzezvinhu zvipenyu, mhando nemhando dzezvipfuwo, nedzezvinokambaira nokuzvova napasi, nedzemhuka dzesango,” zvikabva zvaita saizvozvo. Mwari akasika mhando nemhando dzemhuka dziri panyika, nemhando dzose dzezvipfuwo nedzezvinokambaira nokuzvova napasi. Mwari akaona kuti zvakanaka. Mwari akati, “Ngatiitei munhu akafanana nesu, akatodzana nesu. Ngavave noutongi hwenyika yose nohwehove dzomugungwa neshiri dzedenga nezvipfuwo nezvinokambaira nokuzvova napasi.” Mwari akasika munhu akamufananidza naiye pachake, akavasika vari munhurume nomunhukadzi. Mwari akavakomborera achiti, “Berekanai muwande, muzadze nyika, muitonge. Ivai noutongi pamusoro pehove dzomugungwa, neshiri dzedenga, nezvinhu zvose zvipenyu zvinofamba panyika.”
 Iwe tsimbe, enda kumujuru uongorore maitiro awo udzidze ungwaru. Mujuru hauna mambo, hauna muchinda kana mutongi asi unogadzirira sadza rawo muzhizha unounganidza chokudya chawo pakukohwa.
 Makaita kuti ave ndiye anotonga mabasa amaoko enyu, mukaisa zvinhu zvose pasi petsoka dzake, zvose: hwai nemombe uyewo mhuka dzomusango neshiri dzedenga nehove dzegungwa dzinofamba nomunzira dzomugungwa. TENZI Mwari wedu hakusi kukura ikoko kwakaita zita renyu.”
 “Pamwe ungade zvako kubvunza mhuka dzinotokudzidzisa kana kuti shiri dzedenga dzingatokutaurira, kana kuti utaure nezvinomera panyika zvichakufundisa, kana kuti hove dzegungwa dzichakutsanangurira. Chii pakati pazvo chisingazivi kuti ndiye Tenzi akazvisika? Upenyu hwechinhu chose chinofema huri mumaoko ake uye upenyu hwavanhu vose.
 Mhumhi ichagarisana zvayo nehwayana mbada icharara zvayo pamwechete nembudzana, mhuru neshumba nechigondora chakakora zviri pamwechetewo, zvichifudzwa zvazvo nemwana muduku. Mhou nebere zvichatofura pamwechete vana vazvo vachirara zvavo pamwechete, shumba ichafura sora semombe. Mwana ari kuyamwa achatamba zvake pamwena wemhakure ndumurwa ichiisa zvayo ruoko mumwena wechiva. Hazvizombokuvadza kana kuparadza mugomo rangu rose rinoera nokuti panyika pachange zvino pazara nokuziva Tenzi sokuzadza kunoita mvura gungwa.
 Ndakazvifungawo mumwoyo nezvavanhu kuti Mwari anenge achivaedza zvake kuti avaratidze kuti ivo pachavo imhuka. Zvinowira vanhu ndizvowo zvinowira mhuka, munhu anofa, mhukawo inofa. Zvinofema mweya mumwechete. Munhu haana chaanokunda mhuka nacho nokuti zvose hazvinzwisisiki. Zvose zvinoenda kunzvimbo imwecheteyo. Zvose zvinobva muvhu uye zvose zvinodzokerazve kuvhu. Ndiani angazive kuti mweya womunhu unokwira kumusoro here kana kuti mweya wemunhu unodzika pasi muvhu.
 Pasi ngaparumbidzewo TENZI: imi mazigaranyanya nemi hwenje hose hwegungwa newe moto nechivhuramahwe namazaya echando namazaya echando chamangwanani nemi dutu remhepo rinoita zvaanoreva; imi makomo nezvikomo zvose, miti yemichero nemisidhari yose, imi zvikara nemi mombe dzose, imi zvinhu zvinokambaira, nemi shiri dzinobhururuka, nemi madzimambo apasi nemi vanhu vose, imi machinda nemi vatongi vose vapasi nemi majaya nemhandara pamwechete imi vakwegura nemi vana,